Umaki: i-twitter curation
Ukubaluleka kweMisa: Amathuluzi Wokusiza Ukukhethwa Kokuqukethwe
NgoMgqibelo, Agasti 4, 2012 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Abanye benu kungenzeka ukuthi babuza ukuthi yikuphi ukukhethwa kokuqukethwe. Kunomthamo ongenangqondo wokuqukethwe oshicilelwa kuwebhu nge-Twitter, Facebook, blogs, izindaba, Youtube nakwamanye ama-mediums. Amathuba ukuthi okunye kwalokho okuqukethwe kubalulekile kuzethameli zakho - kepha kudinga ukuhlaziywa okuthile, ukuhlunga nokwethulwa ngendlela ewusizo. Vuliwe Martech Zone, sikhathalela okuqukethwe okuningi. Isibonelo esisodwa yi-infographics. Ngenkathi sithola ithani